घरमा ग्रीष्म फल र तरकारीहरू बढाउनुहोस् 👩‍🌾👨‍🌾 - Ne gerekir?
घरमा ग्रीष्म फल र तरकारीहरू बढाउनुहोस् 👩‍🌾👨‍🌾
गर्मीमा म कसरी आफ्नो बाल्कनीमा फलफूल र तरकारीहरू उब्जाउँछु? घरमा तरकारी र फलफूल बढाउँदै
कोरोनाभाइरस महामारीमा, हामी सबैले आफूलाई आफ्नो घरमा बस्छौं। हामी यो प्रश्न गर्छौं, हामी घरबाट बाहिरबाट किनिएका उत्पादनहरू कसरी बनाउँदछौं।
रोटी बनाउने कुरा घरमै सिकेका छन्, यो समय हाम्रो बाल्कनीलाई बगैचामा परिणत गर्ने समय हो! जब यो खोजी, जुन मनोविज्ञानको लागि धेरै राम्रो हो, यसले तपाईंलाई यसको फलहरू प्रस्तुत गर्दछ, संसार तपाईंको हुनेछ।
घरमा काँक्रा रोप्नु र हुर्काउन ne gerekir?
काखीको बीउ कसरी प्राप्त गरिन्छ?
यदि तपाईंसँग बीउ छैन भने, पूर्ण रूपमा पाकेको (पहेंलो) सलाद आधामा काट्नुहोस्। बीउहरू लिनुहोस् र तिनीहरूलाई गिलास पानीमा १-२ दिनसम्म भिजाउनुहोस्।
त्यसोभए यी बीजहरू ढिलो झिल्लीको साथ छलनीमा लैजानुहोस् र तपाईंको हात / चम्चा / पानीले मलाई रगतको झिल्ली पूर्णतया हटाउनको लागि मालिनुहोस्।
१ गिलास पानीमा ती झिल्लीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन् कि राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् कि १ दिन पछि तल कुन डुब्ने छ। बीउहरू जुन तल बसाउँदछन् ती मध्ये सब भन्दा फलदायी हुनेछ।
बीउहरू लिनुहोस्, तिनीहरूलाई समान रूपमा रुमालमा फैलाउनुहोस् र चिसो हावामा सुख्खा गर्नुहोस्।
यदि तपाईं बीउहरू राम्ररी सुकाए पछि भण्डार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई महिलाको मोजामा राख्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई ओसिलो वातावरणमा राख्न सक्नुहुन्छ। माटो ठूलो भाँडामा राख्नुहोस् (कम्तिमा 30० सेमी उचाई)। तपाईं आफ्नो मल (सुक्खा तरकारी गोलाहरू / अण्डाको शेलहरू / तयार मल) माटोमा मिसन सक्नुहुन्छ।
जब मौसम तातो छ, हामी अब तपाइँको बीउ लाई पुनर्जीवित गर्न सक्छौं। माटोको बीचमा गहिरो प्वाल बनाउनुहोस्। बीउ राख्नुहोस् र बिस्तारै फेरि माटो संग कवर।
माटोलाई जीवन पानी दिनुहोस् (माटोलाई सिचाई गरिएको हुनुपर्दछ)। यसलाई घाममा राख्नुहोस् र त्यसलाई दिनदिनै पानी दिनुहोस्।
जब काँक्राको बोट २०-२20 सेन्टीमिटर भन्दा बढि हुन्छ, माटोमा भएका बोटहरूलाई एउटामा झार्नुहोस्। अरूलाई भाँडामा राख्नुहोस्। यो बृद्धि अवधिमा, हाम्रो बोटले कम्तिमा hours घण्टा देख्नुपर्दछ।
यसलाई कीराहरूबाट जोगाउनुहोस्, बीचमा मल प्रदान गर्नुहोस्, र जब काँचो तयार हुन्छ, तब स्टेम १. 1,5 सेन्टीमिटरमा काट्नुहोस्।
घरमा टमाटर रोप्नु र हुर्काउन ne gerekir?
टमाटरको बीउ कसरी प्राप्त हुन्छ?
यदि तपाईंसँग बीउ छैन भने, राम्रो पाकेको टमाटर आधा मा काट्नुहोस् र बीउ र पानी एक गिलासमा खन्याउनुहोस्। यदि तपाईं पहिले रोपेको बिरुवाबाट बीउ किन्न चाहनुहुन्छ भने; टुप्पो डाँठ र सब भन्दा पाक्ने नजिकै छान्नुहोस्।
टमाटरको रसबाट बीउ अलग गर्नुहोस्। नलीको पानीले छलनीमा बाँकी रहेका बीउहरू राम्ररी सफा गर्नुहोस् र फेरि टमाटरको रसमा खन्याउनुहोस्।
२- days दिन पछि यस पानीमा मशरूम लेयर बन्छ। तपाईं तेस्रो दिन पर्खन सक्नुहुनेछ जबसम्म यो लेयर गाढा हुँदैन। यसलाई किण्वन भनिन्छ।
राम्रोसँग पाकेका बीजहरू तेस्रो दिनमा गिलासबाट बाहिर आउन तयार छन्। गिलासबाट कर्क लेयर सफा गरिसकेपछि फेरि दानालाई फिल्टर गर्नुहोस्। नलको पानीमा सफा गर्नुहोस् र एक चिसो, छायादार वातावरणमा प्लास्टिकमा सुक्नुहोस्।
माटोलाई मलमा ठूलो मलको भाँडोमा राख्नुहोस् र माटोको बिभिन्न बिन्दुमा प्वालहरू बनाउनुहोस्। बीउ छर्कने, सावधानी नराख्नुहोस् तिनीहरू अतिच्छादित गर्न। बिस्तारै तपाईंले माटोको साथ बनाउनु भएको प्वालहरू बन्द गर्नुहोस्। भाँडोमा -3--5 बिउ राख्नु उचित हुन्छ।
माटोलाई जीवन पानी दिनुहोस् (माटोलाई सिचाई गरिएको हुनुपर्दछ)। यसलाई घाममा राख्नुहोस् र प्रत्येक -4- days दिनमा माटोको सतह सुख्खा भएपछि पानी दिनुहोस्। अंकुरण room-5 दिन भित्र कोठाको तापक्रममा वातावरणमा हुनेछ।
एक अज्ञात तर महत्त्वपूर्ण विवरण; यदि तपाईं बढ्दो क्रममा मुख्य शाखा र उभरिएको शाखा बीच अर्को शाखा प्राप्त गर्न कोशिस गर्नुभयो भने, तपाईंले यसलाई तोड्नु पर्छ।
घरमा पेपर रोप्नुहोस् र हुर्काउन ne gerekir?
मरिचको बीउ कसरी प्राप्त गरिन्छ?
यदि तपाईंसँग बीउ छैन भने, राम्रोसँग पाकेको मरिच घाममा सुकाउन छोड्नुहोस्। सिक्केपछि र राम्ररी सुकाएपछि, तपाईंले बीउलाई भित्र लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई खरीद बिना वर्षौं राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पहिले रोपेको बिरुवाबाट बीउ किन्न चाहनुहुन्छ भने; कालो मिर्च छोड्नुहोस् र सबैभन्दा डाँठमा शाखामा मुख्य डाँठमा। त्यस्तै गरी, सुकेपछि बीज लिनुहोस्।
माटोलाई तपाईले मलको साथ ठूलो भाँडामा राख्नुहोस्। माटोमा रहेको दुरीको प्वालहरू। प्वालहरूमा बीउ थप्नुहोस्, १। बिस्तारै फेरि माटो संग यसलाई कभर। जीवनलाई माटोमा पानी दिनुहोस्। यसलाई एक हावा क्षेत्रमा छोड्नुहोस् जसले घमाइलो आधा दिन देख्दछ (या त बिहानको सूर्य वा मध्य दिन सूर्य)। धेरै पानी वा धेरै डिहाइड्रेट नगर्नुहोस्। (प्रत्येक दिन सिंचाई)
-30०--35 दिन पछि, मिर्चको बिरुवालाई माटोबाट बिस्तारै तान्न र त्यसलाई अन्य भाँडामा हाल्ने समय हो। आधा स्टिकको साथ भाँडोमा प्वाल बनाइसकेपछि, यसको बीउ यसको जरालाई हानी नगरी राख्नुहोस्। खुला भागहरूलाई माटोले पुनः कभर गर्नुहोस्।
माटोलाई पानी बिरुवासँग नमिल्ने किसिमले दिइन्छ, र १ हप्ता पनि पानी दिइदैन।
जब पातहरू पहेंलो हुन्छ
घरमा कसरी लहसुन छर्ने र बढाउने ne gerekir?
लसुनको बीउ कसरी प्राप्त हुन्छ?
तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न कि यो बिरूवा बढ्न कति सजीलो हुन्छ जब तपाई यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। बढेको लसुन वास्तवमै सहज छ।
तपाईले विश्वास गर्नु भएको स्थानबाट अझै अस्थिर लसुन अलग गर्नुहोस्।
त्यसमा ठूलो फूलको भाँडो र बिरूवा माटो सेट गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो मल (सुक्खा तरकारी गोलाहरू / अण्डाको शेलहरू / तयार मल) माटोमा मिसन सक्नुहुन्छ।
माटोमा टाढा नहुने प्वालहरू र यी प्वालहरूमा लसुनको लौंगहरू राख्नुहोस्। बिस्तारै माटोलाई ढाक्नुहोस्। लसुनको टाउको छोड्न सकिन्छ, यसले केही फरक पार्दैन।
र हामी तयार छौं ... तपाईं आफ्नो खानामा लहसुनबाट हरियो पातहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं पनि लसुन काट्न सक्नुहुन्छ जब यी पातहरू पूर्ण रूपले पहेंलो हुन्छ। यस बोट बढेको तरिकाबाट तपाईं चकित हुनुहुनेछ, जुन सबै प्रकारका हेरचाहमा अनुकूल छ। माटोलाई थोरै चिसो राख्न सम्झनुहोस्।
जब यो खिल्न शुरू हुन्छ
घरमा प्याज रोप्नु र हुर्काउन ne gerekir?
प्याजको बीउ कसरी प्राप्त गरिन्छ?
लसुन जस्तै, प्याज धेरै सजीलो र चाँडै उब्जनी गर्न सकिन्छ। तपाईंको छनौटको राम्रो प्याजको तल्लो काट्नुहोस् लगभग २. cm सेमी उचाई। टुक्रा छोड्नुहोस् जुन तपाईं समतल, सुख्खा सतहमा माथिल्लो भागको तर्फ सामना गर्दै छोड्नुहोस् र यसलाई १ दिनको लागि सुक्नुहोस्।
१ दिन पछि यसलाई प्लेटमा तल राख्नुहोस् बाहिरी भाग फेदमा राख्नुहोस् र जराको भाग पानीमा राख्न पर्याप्त पानी थप्नुहोस्। जडहरू राम्रोसँग देख्न योग्य नभएसम्म कुर्नुहोस्। त्यसोभए तपाईं सिलाईमा जान सक्नुहुन्छ।
हाम्रो भाँडामा तयार प्याज राख्दा, गहिरो प्वाल नखोल्नुहोस्। यदि केवल जरा माटोले ढाकिएको छ भने यो पर्याप्त हुनेछ। राम्रो पानी वरिपरिको। प्याजलाई स्थिर पानी र चिसो माटोको आवश्यक पर्दछ। एक समय पछि, प्याज आफै माटोमा मा जान सक्छ, तपाईं यसलाई सीधा गर्न आवश्यक छैन।
यदि तपाईं स्वस्थ प्याजहरू बढ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई हप्तामा एक पटक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकसहित पोखाउनु पर्छ। माटोको तल अण्डा राख्नु वास्तवमा यसको निरन्तर पोषणमा योगदान पुर्‍याउँछ।
जब प्याजका हरियो पातहरूले फूलहरू बन्न थाल्छन्, अब तपाईं तिनीहरूलाई स collect्कलन गर्न सक्नुहुन्छ।
घरमा रोप्ने र बढेको आलुका लागि ne gerekir?
आलुको बीउ कसरी प्राप्त हुन्छ?
फेरि, एक धेरै सजिलो र अत्यधिक द्रुत-उब्जनी तरकारी! केवल तपाईंले किन्नु भएको आलु काट्नुहोस् र तिनीहरूलाई माटोमा राख्नुहोस्। धेरै!
माटोमा जीवन पानी दिनुहोस्, तपाईंको भाँडा चौडा हुनु पर्छ। पौष्टिक हुन तपाईं माटो मुनिको अन्डा राख्न सक्नुहुन्छ। यो अंकुरित नभएसम्म छायामा रहनु राम्रो हुनेछ। जब यो अंकुरित हुन्छ, तपाईंले यसलाई घाममा लैजानु पर्छ। धेरै छोटो समयमा आलु काट्नुहोस् आफैंले पूर्ण गर्दछ। माटोलाई चिसो राख्न नबिर्सनुहोस्!
घरमा हरियो सिमीहरू रोप्न र हुर्काउन ne gerekir?
कसरी ताजा गेडाहरू को बीउ प्राप्त गरिन्छ?
यदि तपाईंसँग बीउ छैन भने, सूर्य मा आफ्नो मनपर्ने राम्रो बीन्स सुख्खा। जब सिमी पहेँलो र खस्ता छ, बिउहरू हटाउनुहोस् र त्यसलाई एक कचौरा पानीमा राख्नुहोस्। जब जरा बाहिर आउँछ, यो ठूलो भाँडो मा बीउ राख्न समय छ।
माटोमा प्वाल बनाउनुहोस् र बीउ राख्नुहोस्। जीवनलाई माटोमा पानी दिनुहोस्। बिचमा मलको साथ माटोलाई खुवाउन नबिर्सनुहोस्। तपाईं सुक्खा फल / तरकारी शेल र अण्डाको खाकाहरूबाट घरमा मलहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
6-10 दिन पछि अंकुरण हुनेछ। जब स्प्राउट्स बिरुवा बन्छ, यसलाई ठूलो भाँडा / माटोमा छुट्टयाउन को लागी आवश्यक छ। यो यस्तो तरीकाले थप्न सकिन्छ कि यो न त माटोको मुनि छ र न माटो यसको भूमिपट्टिको रूपमा जुन हामी अर्को भाँडोबाट लिन्छौं। यो न्यानो मौसम मा आराम संग विकास हुनेछ। जब बिरुवाको हाँगा लामो हुँदै जान्छ, तपाईं तिनीहरूलाई डोरीको सहायताले कहिँ निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। यसले माटोलाई थोरै चिसो राख्नु पर्छ।
चेरी & Sour Cherry
घरमा बिरुवा रोप्न र बढाउन ne gerekir?
चेरीको बीउ कसरी प्राप्त हुन्छ?
यदि तपाईंसँग बीउ छैन भने, केही चेरीहरू छान्नुहोस् तपाईंले पर्याप्त मात्रामा पाउनुहुन्न र तिनीहरूको बीज लिनुहोस्। तपाईंले घाम वा छायाँमा bought दिनका लागि किन्नुभएको बीज सुकाउनुहोस्।
सेतो पिलको धारिलो भाग सफा बीजमा चाकूको साथ स्लाइस गर्नुहोस्। यो सेतो शेल हटाउनाले तपाईले २ हप्ता बचाउनुहुनेछ।
तपाईंको बीउहरू तयार छन्! अब आफ्नो बीउ एकै रूपमा रुमालमा फैलाउनुहोस्। प्लास्टिकको झोला वा प्लास्टिक कन्टेनरमा तपाईको बीउ भएको रुमाल राख्नुहोस्। न्यापकिन राम्ररी पानी दिनुहोस् र हावा भित्रै राख्न ब्याग / कन्टेनर बन्द गर्नुहोस्। यस संयन्त्रलाई अलि न्यानो वातावरणमा छोड्नुहोस् ता कि पानी कड्न र फेरि बीउहरू भिजाउँदछ।
१ हप्ता पछि बीउहरू उम्रनेछन्। यो समय तिनीहरूलाई साना भाँडामा रोप्ने समय हो। माटोमा जीवन पानी दिन नबिर्सनुहोस्। जसरी माटो सुख्खा हुन्छ, यसलाई ओसिलो पार्नुहोस् (हप्ताको २- times पटक) र भाँडोलाई घाममा राख्नुहोस्।
एक पटक अंकुर अंकुरमा परिवर्तन भयो भने, यसलाई ठूलो कन्टेनर / माटोमा सार्न नबिर्सनुहोस्। आफ्नो माटो मल गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईले चेरीहरू बढाउन उहि तरीका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
घर मा स्ट्रबेरी रोप्न र बढाउन ne gerekir?
स्ट्रबेरी बीउहरू कसरी प्राप्त हुन्छन्?
यदि तपाईंसँग बीउ छैन भने स्ट्रबबेरी मध्ये एउटा छान्नुहोस् तपाईले पर्याप्त पाउनु सक्नुहुन्न। यसलाई एक कचौरा पानीमा चक्कुले छुट्ट्याउनुहोस् ताकि बीजलाई नोक्सान नहोस्। पानीको सतहमा उठ्ने बीउहरू लिनुहोस् र खारेज गर्नुहोस्। पानीमा डुबाइएको बीउलाई एक कुचाईको साथ अलग गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सुख्खा बनाउन दिनुहोस्।
माटोलाई मलको साथ मिश्रको सानो भाँडोमा राख्नुहोस्। सुका दानालाई माटोको अलग भागमा राख्नुहोस्। यो स्वस्थ हुनेछ यदि तपाईंले यसलाई तलबाट पानी दिनुभयो किनभने बीज एकदम सानो छ र यसले तपाईंले छर्कने आकारलाई विकृत पार्न सक्छ। तपाईं पानीले गहिरो कचौरा भर्न सक्नुहुन्छ र कचौरामा तपाईंको भाँडो राख्न सक्नुहुन्छ। यसैले यसले तल प्वालबाट पानी तान्नेछ। तर यो माटो जीवनको पानी हुनेछ, यो पूर्ण रूपमा पानी अवशोषित गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि बीउमा केहि थप माटो छर्कनुहोस्।
भाँडो मा एक तन्का राख्नुहोस् र एक छाया, चिसो वातावरण मा अंकुरण गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यो पक्कै सूर्यलाई छुनु हुँदैन। जब यो फुट्न थाल्दछ, तन्का हटाउनुहोस् र मामीलाइ हर हालतमा ओसिलो राख्नुहोस्।
जब हाम्रो स्प्राउट्स बिरुवामा परिवर्तन हुन्छ, हामी त्यसलाई छुट्टै भाँडामा रोप्न सक्छौं।
घरमा कालोबेरी छर्न र बढाउन ne gerekir?
ब्ल्याकबेरीको बीउ कसरी प्राप्त गरिन्छ?
यदि तपाईंसँग बीज छैन भने, ब्ल्याकबेरी छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं पर्याप्त पाउँनुहुन्न। एक कचौरा पानीमा, बीउलाई आफ्नो हातले कुल्चनुहोस् ताकि तिनीहरूले बीजलाई नोक्सान नपारून्। पानीको सतहमा उठ्ने बीउहरू लिनुहोस् र खारेज गर्नुहोस्। पानीमा डुबाइएको बीउलाई एक कुचाईको साथ अलग गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सुख्खा बनाउन दिनुहोस्। तपाईं एक वर्ष सम्म फ्रिजमा बीउहरू सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई एक नैपकिनमा राखेर र उनीहरूलाई बोराएर। तपाईले स्वस्थ बिरुवाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यस प्रक्रियामा बिउहरूले आराम पाउनेछन्।
माटोलाई मलको साथ मिश्रको सानो भाँडोमा राख्नुहोस्। माटोको अलग भागमा बिउ छर्कनुहोस्। यो स्वस्थ हुनेछ यदि तपाईंले यसलाई तलबाट पानी दिनुभयो किनभने बीज एकदम सानो छ र यसले तपाईंले छर्कने आकारलाई विकृत पार्न सक्छ। तपाईं पानीले गहिरो कचौरा भर्न सक्नुहुन्छ र कचौरामा तपाईंको भाँडो राख्न सक्नुहुन्छ। यसैले यसले तल प्वालबाट पानी तान्नेछ। तर यो माटो जीवनको पानी हुनेछ, यो पूर्ण रूपमा पानी अवशोषित गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं बीउमा केही माटो छर्कन सक्नुहुन्छ। मार्च र मे बीच रोपण राम्रो परिणाम दिन्छ।
तयार बिरुवाहरू खरीद गर्दै
छोटो समयमा ट्रेन गर्न
घरमा फल / तरकारी बिरुवा बढ्नका लागि ne gerekir?
कसरी र कुन फल / तरकारीबाट बिरुवामा बिउ लिनु पर्छ?
तयार बिरुवाहरू खरीद गरेर, तपाईं माथिको पानी र हेरचाह सिफारिसहरूको साथ तिनीहरूको देखभाल गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले, तपाईले क्वारेन्टाइनमा हुँदा तपाईको आवश्यकताहरूको समाधान छोटो समयमा पाउनुहुनेछ।